Ciidanka Mareykanka ee ku sugan Waqooyiga Suuriya oo bilaabay inay isaga baxaan deegaanada… – Hagaag.com
Ciidanka Mareykanka ee ku sugan Waqooyiga Suuriya oo bilaabay inay isaga baxaan deegaanada…
Ciidanka Mareykanka ee ku sugan Waqooyiga Suuriya ayaa bilaabaya in ay isaga baxaan deegaanada ay ku sugan yihiin xilli Milatariga Turkiga uu isku diyaarinayo howlgal ka dhan ah kooxda Kurdida iyo dagaalyahanada Kale.
Washington ciidankeeda ma taageeri doono howlgalka Turkiga ee ka dhanka ah Kurdida, waxaana sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo saari doonaa ciidankeena, sidaasi waxaa sheegtay xoghayaha dhanka warfaafinta aqalka cad Stephanie Grisham.
Balse ma cada waqtiga rasmiga ah ee Mareykanka ugu danbeyn ciidankiisa uu kala bixi doono Waqooyiga Suuriya kuwaasi oo tiradoodu ay tahay, 1,000 Askari.
Ms Stephanie ayaa intaa raacisay in Turkiga uu bilaabay dhaq-dhaqaaq ku aadan howlgalada milatari ee waqooyiga Suuriya.
Afhayeenka aqalka cad ayaa ugu danbeyn sheegtay in Isniinta maanta ah ay ciidankooda ka baxeen saldhigyada Tel Cabyad iyo Ras Al-Ceyn oo u dhow xadka Turkiga.
Amarka uu bixiyey Madaxweynaha Mareykanka ee ka saarida ciidankiisa waqooyiga Suuriya ayaa kala kulmay cambaareyn qaar ka mid ah dadka aadka u difaaca Madaxweynaha oo sheegay in arrintani bidhaamineyso in xulufada Mareykanka aanan dib dambe u aamini doonin Mareykanka.